नार्कोननको सफलताको भिडियो - म्याथ्यु सी.
म २१ वर्षको हुँदा दुर्घटनामा परे। मेरो ढाड भाँचियो। डाक्टरले मलाईं दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खान भन्नुभयो ताकि मलाईं नदुखोस्। मैले सिफारिसअनुसार नै पेनकिलर खान थाले। सुरूमा कुनै समस्या भएन।
एक दिन म एउटा पार्टीमा गएको थिए। त्यहाँ मलाईं एउटा साथीले “ओइ, तिमीलाई थाहा छ, यो सुँघ्न सकिन्छ” भनेर भन्यो। मैले भने "हो, ठीक छ, “हामी पनि सुँघेर हेरौ नि त।" त्यो नै मेरो ठूलो गल्ती थियो।
सात वर्षपछि म पूरै कुलतमा परिसकेको थिए, मैले कुनै पनि काम गर्नु अघि कुनै पनि कुलतमा लागुऔषध सेवन गर्नैपर्थ्यो। यसैबिचमा मैले एक दिन थाहा पाए कि मैले अहिलेसम्म हिरोइन सेवन गर्दै रहेछुँ, म यो थाहा पाएर एकछिन स्तब्ध भए।
त्यसपछि मैले इन्टरनेट मार्फत नार्कोननको बारेमा थाहा पाए र उनीहरूलाई फोन गरे भोलिपल्टैको फ्लाइट समातेर त्यहाँ गए र आफूलाई सुधारे।
मेरा अभिभावक अहिले मलाईं पहिले जस्तै मेहनती र इमान्दार भएको देख्दा निकै खुशी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अहिले मलाईं सधैँ "म्याट! तिमीलाई फेरि पहिले जस्तै देखेर हामी निकै खुशी छौं। हामीले हुर्काएको हामीलाई थाहा छ तिमी असल काम गर्न सक्छौ।" भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। उनीहरूले अहिले त्यस्तो खुशी पाएका छन्।
नार्कोननले मलाईं मूकुलतः मेरो जीवन फिर्ता दियो। किनभने म खराब बाटोमा गइरहेको थिए। या त म जेलमा हुन्थे वा मरिसक्थे। दुईमध्ये एक त पक्कै हुन्थ्यो। तर, अहिले म लागुऔषध रहित जीवनको भरपूर आनन्द लिदैछुँ।